Orinasa mpanamboatra hafanana penina any China | Taile
1. [Fampiasana Safein] Ny sandry milomano dia natao hametrahana sy hakana toerana azo antoka; Tanana anti-malama ho an'ny fandidiana mety. fanontana manontolo dingana mety sy azo antoka. Rehefa mikatona ny tsindry tsindry dia hapetaka amin'ny takelaka ny penina mba hahitana vokatra fanontana tsara kokoa.
2. Raiso ny fifehezana microprocessor sy ny mémoire parmière miaraka amin'ny famerana mazava kokoa, tontonana fanaraha-maso mikasika. Afaka manainga amin'ny fihodinan'ny 360 degre, mora mandray zavatra ary mamindra ny sary amin'ireo zavatra miendrika manokana manana hatevin'ny sasany. Ny ampahany lehibe dia vita amin'ny akora avo lenta, izay miorina tsara sy mateza kokoa. Fitsaboana loko ivelany, kilasy malefaka sy ambony. Noho ny fanamboarana fitaovana tsara dia tsara kokoa ireo vokatra vita sary.
3. [Fanaraha-maso hendry nomerika] Mpifehy ny mari-pana sy ny fotoana tafiditra amin'ny fampisehoana iray ho mora fametrahana sy fandinihana. Ampiasaina amin'ny tontonana fanaraha-maso mikasika izay fehezin'ny programa mikroprocessor ho an'ny mari-pahaizana fanaraha-maso avo lenta kokoa.
4. [Kalitao maharitra] Ireo singa fototra dia ny akora hafarana avy any ivelany ary tsaboina miaraka amin'ny famaranana lacquer izay mahatonga ny milina milamina, milamina kokoa ary maharitra.
5. [Fahombiazana avo lenta] Ampiasaina be amin'ny karazana penina, toy ny plastika, penina, sns. 6 penina dia azo afindra amin'ny fotoana iray.
6. [Mora entina] Ny lamaody dia lamaody sy tsara tarehy, mora entina ary maivana
7.Touch efijery LED fampisehoana ny milina fanaovana mofo.
8. Amin'ny alàlan'ny fanamainana Silôna hiarovana ny penina, ataovy mety tsara kokoa ny fanaovana hajia mafana.
9.A penina ara-nofo rehetra, tsy mila coating sublimation.
10.Ny penina ity milina fanontam-pirinty ity dia be mpampiasa amin'ny karazana penina, toy ny penina plastika, penina, sns. Fa ny penina kosa dia tsy maintsy mahatohitra hafanana.
11. Ny faritra dia tsy miraikitra, misoroka ny fandoroana ny famindrana ary tsy mila takelaka silicone / teflon misaraka.
10. [Aorian'ny varotra varotra] Antoka fahafaham-po.Raha misy antony tsy nahafa-po anao dia ampahafantaro anay anay ary ny serivisinay dia hanao izay azonay atao mba hanampiana anao.
Karazana: Machine Press Press
Kilasy mandeha ho azy: manual
Hery lehibe: 350W
Fampiharana: penina ara-materialy rehetra, tsy mila fonosana sublimation
Takelaka takelaka: masinina sublimation
Refy (L * W * H): 48 * 42 * 37cm
Ilaina: 6 Pens indray mandeha
Faritra fanontana: penina plastika (savaivony avy amin'ny 8-10mm)
Taratasy: taratasy famindrana penina
1 x Masinina fanoratana hafanana penina nomerika
1 x Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa anglisy
Teo aloha: milina fanodinana hafanana mug
Manaraka: Masinina fanaovana gazety hafanana Protale
Milina fanontam-pirinty Pen Heat